STC-yakateedzana Machine technical Tsananguro -Wuxi Daya Technology Co, Ltd.
110 Ton C Chimiro Double Point Crank Precision Press
5. Izvo zvehunyanzvi zvinodiwa
(1) Yakakwira frequency kudzima yemasiraidhi gwara, kuomarara pamusoro peHDRC45 madigiri
Zvakanakira:kupfeka kuramba kwakanyatsogadziriswa. (hapana yakakwira-frequency kudzima kurapwa mune vamwe vagadziri)
(2) Slider giredhi njanji nyanzvi kukuya kugadzira, pamusoro roughness pakati Ra0.4-Ra0.8 ，
Zvakanakira:chengetedza yakakwira chaiyo, pfeka yakaderedzwa zvakanyanya. (hapana kudzima uye kukuya kugadzirwa nevamwe vagadziri)
(3) Slide njanji ndege 0.01mm / M, yakanyanya kunyatsoita.
(4) Yese gasi redunhu yedu zvinhu maJapan SMC.
(5) Isu tinoshandisa iyo American MAC brand jet yemagetsi vharuvhu, jet mhinduro senzwi iri kumusoro.
(6) Izvo zvinhu zvecrankshaft i42CrMo (Zvakafanana zvinhu seAIDA).
Zvakanakira:30% yakasimba kupfuura simbi makumi mashanu, hwakareba hupenyu hwebasa. (kazhinji 45 simbi kubva kune vamwe vagadziri)
(7) Sleeve yemhangura ndeye zqsn10-1 (tin-phosphorus bronze), iyo yakafanana neAIDA sleeve yendarira.
Vamwe vagadziri vanoshandisa BC6 (colliers ndarira inonzi zvakare 663 mhangura), inova 50% yakasimba kupfuura yakajairwa mhangura (kumanikidzwa kwepamusoro) uye yakasimba uye yakasimba. Yakareba kurongeka uye hwakareba hupenyu hwebasa.
(8) Isu tese pombi iri Φ 6, kuyerera kwemafuta, kwete nyore jam. (mamwe mafekitori anowanzo shandisa Φ 4).
(9) Iyo tee inogadzirwa neJapan brand TM-3 sintered mhangura chiwanikwa (zvakafanana zvinhu seAIDA)
Kubatsira: mukana wekuti inoruma yakafa inoderedza zvakanyanya (general mugadziri isimbi yakakandwa).
⑴ Kufambisa uye kuchengetedza michina:
Touch Iyo yekubata skrini inoratidza mavara echiChinese (kana chinja pakati peChinese neChirungu), iri nyore uye inonzwisisika, uye inoratidza akasiyana madhata paramita emuchina, senge huwandu hwekurohwa, zvemagetsi CAM Angle, nezvimwewo inogona kuiswa kuburikidza neyekubata skrini.
③ Kushanda uye kutadza ruzivo kuratidza, kuitira kuti vashandisi uye vanochengetedza nekukurumidza vagadzirise matambudziko emapepanhau, vadzikise nguva yekuzorora;